२०७४–चुनाव – Page 32 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
बुधबार राति १२ बजेदेखि सवारी निषेध
काठमाडौं, २० मंसिर । दोस्रो चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुने ४५ वटा जिल्लामा बुधबार राति १२ बजेदेखि सवारीसाधन निषेध गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदानको अघिल्लो दिन २० गते राति १२ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा निषेध गरिएको हो । गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मतदानका दिन सुरक्षा निकाय, […]
कार्की, शाही र तिमिल्सिनालाई देजमोले ग¥यो कारबाही
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एक वक्तव्य जारी गर्दै संगठनको निर्णय विपरीत कार्य गरेको भन्दै अछाम जिल्लाका शिवसुन्दर शाही र सिन्धुली जिल्लाका शान्तिमान कार्कीलाई मोर्चाको साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको जनाएका छन् । अध्यक्ष गजुरेलले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै संगठनको निर्णय विपरीत काम गरेको भन्दै पाँचथरका […]
वाम गठबन्धनः भ्रम र वास्तविकता
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोश्रो चरणको निर्वाचन हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । यो निर्वाचनमा कथित वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बीच एकअर्का बीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । र, आ–आफूले चुनाव जित्ने दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरुले एकअर्काप्रति लगाइरहेको आरोप र उनीहरुले जनतालाई दिएको झूठो आश्वासनको बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar
काठमाडौं, १९ मंसिर । दोस्रो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता परिचय पत्र वितरण आजबाट सुरु भएको छ । मंसिर २१ गते निर्वाचन हुने ४५ जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रबाट परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मंगलबार र बुधबार मतदाता परिचय पत्र वितरणको कार्यक्रम छ । आफ्नो परिचयपत्र लिन आफूले भोट हाल्ने […]
सीमा क्षेत्रमा कडा सुरक्षा जाँच, संयुक्त गस्तीदेखि तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग
कपिलवस्तु, १९ मंसिर । निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा बिहीबार हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सुरक्षा जाँच कडा गरिएको छ । ३ दिन यता ग्रामीण र सहरी बस्तीका ठाउँठाउँमा आकस्मिक चेक थालिएको छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम र सहायक मार्गहरु पनि ‘सरप्राईज चेकिङ गरिएको छ । सीमानाका कृष्णनगर, मर्यादपुर र चाकरचौडामा तालीम प्राप्त कुकुर प्रयोग गरेर […]
शान्तिमान प्रतिक्रियावादी र घोर दक्षिणपन्थी अवसरवादी गुटसँग आत्मसमर्पण गर्न पुगे :
सिन्धुलीको १ नं. निर्वाचन क्षेत्रमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका उम्मेदवारहरुको पक्षमा राम्रो चुनावी माहौल बनिरहेको थियो । प्रतिनिधिसभामा मैले जित्ने स्थिति बनेर गएको थियो । प्रदेशमा पनि राम्रै स्थिति थियो । वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले हार्ने स्थिति प्रवल बनेर गएको थियो । हामी चुनावी प्रचार प्रसारमा गाउँ गाउँमा हिडिरहेका थियौं, सहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइते योद्धाहरुसँग […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Interview, mainNews, National News
देजमोको “मुठ्ठी” चिन्हमा जनताको सहयोग र समर्थन जुटेको छ
(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) केन्द्रीय सल्लाहकार सिमितिका अध्यक्ष, नेकपा (क्रान्तिकारी माओबादी) संबध्द देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक उम्मेदबार तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्ब महासचिव, आदिवासी जनजाति सूचि परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलका पूर्व संयोजक, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल तथा संघीय गठबन्धन, नेपालका प्रवक्ता समेत रहनुभएका त्रिभुवन विश्वबिध्यालयका प्राध्यापक डा. […]
वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन एउटै ड्याङका मूला हुन् : परि थापा
धनन्जय अवस्ति/अत्तरिया । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का पूर्वकार्यालय सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका केन्द्रीय सचिव परि थापाले वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन एउटै ड्याङको मूला भएको बताउनुभएको छ । सोमबार (आज) कैलालीको गोदावारी नपा अत्तरीयामा क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, ७ नं. प्रदेश समन्वय समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताउनु भएको […]